Sida loo sameeyo hadiyad laga helo fiidiyowga: barnaamijyada iyo barnaamijyada | Abuurista khadka tooska ah
Waxay nagu sii kordheysaa anaga oo duubna fiidiyowyada. Laakiin sidoo kale waxaan dooneynaa fiidiyowyadaasi inay noqdaan qaab muujinaya waxa aan dareemeyno. Dhibaatadu waxay tahay in qof walbaa uusan aqoon sida looga sameeyo hibo fiidiyowga. Ma kugu dhacdaa adiga?
Haddii aadan aqoon sida loo sameeyo, oo aad si deg deg ah ugu baahan tahay fiidiyow u beddelo gif, halkan waxaan ku siineynaa fursado kala duwan, maxaa yeelay laguma sameyn karo oo keliya codsiyada; sidoo kale waxaa jirta suurtagalnimada inaadan u baahnayn iyaga.
1 Waa maxay gifs animated
2 Sida looga sameeyo hibo fiidiyowga: xulashooyinka aad haysato
3 Sida gif looga sameeyo fiidiyaha barnaamijyada leh
4 Sida looga sameeyo hibo fiidiyow leh barnaamijyo
5 Sida gif looga sameeyo fiidiyoow barnaamij la'aan
Waa maxay gifs animated
Marka ay tahay barashada sida hibada looga sameeyo fiidiyowga, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad si cad u sheegto waa: nooca gif ee aan ula jeedno. Sidaad ogtahay, gif waa qaab muuqaal ah. Way ka culus tahay jpg, taas oo ah tan ugu badan ee la isticmaalo, isla mar ahaantaana waa mid ka mid ah kuwa kuu oggolaanaya inaad yeelato asal hufan. Laakiin sidoo kale waxaa jira gifs firfircoon.
Kuwani waa taxane animated in loo abuuray in loop a joogto ah. Tusaale ahaan, ka soo qaad in aad haysatid buug xusuus qor ah oo aad xaashi kasta ku sawirto dabeecad ku dul socota xaashi kasta. Haddii aad dhammaantood qaadatid oo aad si dhaqso ah u xoqdo, waxay u ekaan doontaa fiidiyoow, sax? Hagaag, taasi waa waxa gif-ka animatedku ku saabsan yahay. Waa hab lagu siiyo dhaqdhaqaaq sawirrada ama looxyada.
Si kastaba ha noqotee, hadda, fiidiyowyada sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo gifs firfircoon.
Sida looga sameeyo hibo fiidiyowga: xulashooyinka aad haysato
In kasta oo aan horumarin doonno mid kasta oo iyaga ka hooseeya, waa inaad ogaataa in gifs-yada la kiciyo, ama wixii la mid ah, sameynta hibo dhaqdhaqaaq leh (ama sawirro ama fiidiyoow) waa lagu guuleysan karaa:
Iyadoo la adeegsanayo codsiyada shabakadda, labadaba taleefannada gacanta iyo kombiyuutarada
Iyada oo leh barnaamijyo animation ah. Intooda badan (kuwa wanaagsan) waa la siiyaa oo haddii aad kaliya u isticmaaleyso heerka isticmaalaha uma qalmo in laga baxo.
Iyadoo leh barnaamijyo bilaash ah oo leh shaqooyin aasaasi ah.
Sida gif looga sameeyo fiidiyaha barnaamijyada leh
Waxaa jira barnaamijyo badan oo tafatirka fiidiyowga ah. Iyo sawir sidoo kale. Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad sameyso GIF muuqaal ah, waa inaad ku tiirsanaataa kan dambe si aad u gaarto. Sidaa darteed Gimp, Photoshop iyo wixii la mid ah ayaa noqon lahaa xulashooyinka ugu caansan ee laga kala xusho, in kastoo ay jiraan kuwa kale oo iyaguna shaqeyn kara sida ImgFlip Gif Creator, Microsoft GIF Maker, Recordit Fast Screencast, Shout ...
Kuwa ugu caansan, gaar ahaan naqshadeeyayaasha, waa Photoshop, maadaama si fudud loo samayn karo. Tallaabooyinka sidan leh:
Fur fiidiyowga Photoshop. Si tan loo sameeyo, waa inaad tagtaa Faylasha / Soo Dejinta / Muuqaalka Muuqaalka ee lakabyada (looxyada ilaa lakabyada).
Kadibna hagaaji tayada. Waa muhiim in fiidiyowga aad abuurtay uusan aad u dheereyn, laakiin uu yahay dhowr ilbiriqsi. Haddii kale, marka lagu daro inaad aad u culus tahay, waxaa suuragal ah inaadan haysan xusuusta aad ku tafatirto.
U keydi GIF ahaan.
Sida looga sameeyo hibo fiidiyow leh barnaamijyo
Sida for codsiyada si GIF looga sameeyo fiidiyowga, runtu waxay tahay inay jiraan fursado badan oo loogu talagalay. Kuwa aan kugula talineyno waxaa ka mid ah:
Waxaa loo heli karaa labadaba macruufka iyo Android, waxaad ka abuuri kartaa hibo fiidiyow ama sidoo kale dhowr sawir. Intaa waxaa sii dheer, waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku qurxiso qoraallada, istiikarada, istiikarada, miirayaasha isla markaana ka dhigto qaar saameyn gaar ah ku siiya taabasho gaar ah.
Waan jecel nahay maxaa yeelay waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan doorano haddii aan dooneyno GIF inuu u ciyaaro si joogto ah ama hal jeer.
Xaaladdan oo kale, Moment ayaa indhaheenna soo jiita maxaa yeelay, inkasta oo aad ka abuuri karto GIF fiidiyow ama sawirro, waxa wanaagsan ayaa ah inaad sidoo kale ku dari karto muusigga asalka ah. Waxay leedahay shaqooyin la mid ah barnaamijyada kale, sida ay ka mid yihiin qoraallada, istiikarada, jarista jajabyada, iwm. laakiin codka ayaa ah waxa ugu soo jiidan kara dareenkaaga.
Si fudud loo fahmo. Waa codsi kaas oo, markii aad gasho, kuu oggolaanaya inaad geliso xoogaa sawirro ah ama fiidiyoow ah si aad u gooyso waxaad xiisaynayso. Way fududahay in la maareeyo taas oo kaa dhigi doonta, ilbiriqsiyo gudahood, inaad ogaato sida loo abuuro wax badan oo iyaga ka mid ah.
Waxa fiican waa taas waxay kaloo leedahay xog ururin GIFs ah, Markaa hadaadan rabin inaad dhibto abuuristeeda, waxaad ku saxi kartaa mid aad jeceshahay qoraallo, sawirro ama istiikirro waxaadna u adeegsan kartaa tusaale ahaan sidii aad ku abuuri lahayd wax cusub.
Waxa kaliya ee xun ayaa ah in ay mararka qaar xayeysiis kugu ridaan, laakiin waa u qalantaa sugitaan (iyo liqitaanka xayeysiinta) haddii aad badanaa isticmaasho
Haa, codsiga farriinta lafteeda ayaa hadda kuu oggolaanaysa inaad hibo ka samayso fiidiyoow. Si tan loo sameeyo, waa inaad gujisaa kamaradda, halkaasoo aad ku qaadatid sawirrada ku dhex jira codsiga.
Qabo si aad u abuurto fiidiyoow, ka dibna dalag ku filan si aad u sameyso hibo (waxay ku tusi doontaa qaybta goynta). Xaqiiqda dhabta ah ayaa ah in fiidiyowga GIF uu ka yar yahay lix ilbiriqsi.
Hadda, ka waran haddii aad fiidiyoow ka rabto galabta? Dhib ma leh, waxaad u garaacday Gallery si aad ugu soo lifaaqdo fiidiyaha muraayadahakuna way soo muuqanayaan. Mar labaad waxaad dooraneysaa taxane gaaban (wax ka yar lix seken) waadna abuuri kartaa.
Sida gif looga sameeyo fiidiyoow barnaamij la'aan
Dhammaan waxyaabaha kor ku xusan ka dib, waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad wax barnaamijyo ah yeelato. Mana rakibtid codsiyo ama fiidiyowgaaga uma soo geliso degellada dibedda halkaasoo aadan ka ogayn waxa ay goor dambe ku sameyn doonaan.
Marka, ikhtiyaarka aad u hartay waa inaad barataa sida fiidiyoow looga sameeyo hadiyad la'aan iyadoo aan waxba la isticmaalin. Haa, waa suurtagal in la fuliyo. Xaqiiqdii, waa xeelad aan si fiican loo aqoon, laakiin loo adeegsan karo hagaajin ahaan.
Si tan loo sameeyo, waad sameyn doontaa u baahan tahay inaad fiidiyowgaaga geliso Youtube-ka. Halkaas waxaad ku haysataa ikhtiyaar aad ku wadaagto. Laakiin sidoo kale tan gelinta, emaylka iyo GIFs. Waana halka aad ku awoodi karto inaad sameyso iyada oo aan loo baahnayn inaad wax kale qabato. Dabcan, maskaxda ku hay in dhammaan fiidiyowyada YouTube-ku aysan haysan ikhtiyaarkan; Taasi waa, kama muuqan doonto dhammaantood, laakiin waxaad ku arki doontaa oo keliya qaar.
Kuwa kaa tagaya, waa inaad doorataa oo keliya markaad rabto inaad bilowdo iyo goorta ay dhammaato. Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad qoraal ku darto oo, ugu dambeynti, adigoo gujinaya "Abuur GIF", waxaad kuheli doontaa ilbiriqsiyo gudahood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Sida fiidiyowga looga sameeyo gif
Sida loo sameeyo saamaynta sawirka ee Photoshop